Safetygbọ njem nchekwa njem nke Canada na-ekwupụta nkwupụta maka ihe ọghọm ụgbọ elu mba ofesi nke Ukraine
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Safety » Safetygbọ njem nchekwa njem nke Canada na-ekwupụta nkwupụta maka ihe ọghọm ụgbọ elu mba ofesi nke Ukraine
Airlines • Airport • Akụkọ mkpakọrịta • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Akụkọ na -agbasa akụkọ Canada • Crime • Akụkọ na -agbasa ozi Iran • News • Safety • Tourism • Transportation • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ na -agbasa Ukraine • Akụkọ dị iche iche
The Kọmitii Nchedo ationgbọ njem nke Canada (TSB) na-enye ndị ezinụlọ na ndị ọ hụrụ n'anya nke ndị nwụrụ n'ihe ọghọm metụtara nkasi obi ya Internationalgbọ elu mba ofesi nke Ukraine ụgbọ elu 752 na Tehran, Iran.
N'ikwekọ na nkwekọrịta mba ụwa (International Civil Aviation Organisation - Annex 13), Boardlọ Ọrụ Nchọpụta Mberede Airgbọelu nke Civil Aviation Organisation nke Islamic Republic of Iran na-eduga nyocha na ihe mberede ahụ. N’ikwekọ nkwekọrịta a, site na ọnwụ nke ụmụ amaala Canada, TSB ahọpụtala ọkachamara ga-anata ma nyochaa ozi bụ eziokwu nke Steeti Occurrence wepụtara, ma nyochaa ọganihu nke nyocha ahụ.
The TSB ka dị iji nye enyemaka ọ bụla nke ọrụ enyemaka nke ndị ọrụ nyocha ihe ọghọm nke ndị Iran na Ukraine rịọrọ. Ihe a bụ ozi niile dịnụ ruo oge ọzọ.
TSB bụ ụlọ ọrụ nọọrọ onwe ya na-enyocha ikuku, mmiri, pipeline, na njem ụgbọ njem. Ebumnuche ya bụ ọganihu nke nchekwa njem. Ọ bụghị ọrụ nke Board ịnyefe mmejọ ma ọ bụ ikpebi iwu obodo ma ọ bụ nke mpụ.